Tailwind CSS: Framework CSS API voalohany azo ampiasaina sy API ho an'ny endrika haingana sy haingana | Martech Zone
Na dia miditra amin'ny teknolojia isan'andro aza aho dia tsy dia manam-potoana betsaka araka izay tiako hizarana ireo fampidirana sarotra sy mandeha ho azy ampiasain'ny orinasako ho an'ny mpanjifa. Ary koa, tsy dia manana fotoana be dia be aho. Ny ankamaroan'ny teknolojia soratako dia orinasa mitady Martech Zone manarona azy ireo, fa indraindray indray mandeha - indrindra amin'ny alàlan'ny Twitter - hitako ireo buzz manodidina ny haitao vaovao mila zaraiko.
Raha miasa amin'ny famolavolana tranonkala ianao, ny fampivoarana ny fampiharana finday, na ny fananganana rafitra fitantanana atiny fotsiny aza dia mety niady tamin'ny fahakiviana tamin'ny fomba nifaninana tamina takelaka maro ianao. Na dia miaraka amin'ireo fitaovana fampandrosoana mahavariana natsangana tao anaty tranokala tsirairay aza, ny fanarahana sy ny fanadiovana CSS dia mety mitaky fotoana sy hery be loatra.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny mpamorona dia nanao asa mahafinaritra be dia be tamin'ny famoahana ireo fanangonana ireo style izay efa voaomana sy vonona hampiasaina. Ireo CSS Stylesheets dia fantatra amin'ny anarana hoe CSS Frameworks, manandrana mandray ny fomba rehetra sy ny fahaiza-manao mamaly mba hahafahan'ny mpamorona manondro ny rafitra fotsiny fa tsy manangana rakitra CSS avy hatrany am-boalohany. Ny rafitra malaza sasany dia:
Bootstrap - rafitra iray nivoatra nandritra ny folo taona, nampiditra voalohany tamin'ny Twitter. Manolotra fiasa tsy tambo isaina izy io. Izy io dia manana lafy ratsy, mitaky SASS, sarotra ampidirina, miankina amin'ny JQquery, ary mavesatra tokoa ny mitondra azy.
Foundation - rafitra CSS generic sy azo ampiasaina kokoa izay misy singa an-taonina izay azo amboarina mora foana. Ankoatr'izay, misy Fototra ho an'ny mailaka ary Motion UI ho an'ny sarimiaina.
Na dia misy drafitra hafa manao asa lehibe aza amin'ny fandraisana ireo singa mpampifandray mpampiasa malaza, ny Tailwind dia mampiasa metodolojia fantatra amin'ny hoe CSS Atomika. Raha fintinina, Tailwind dia nandamina tamim-pahakingana ireo anaran'ny kilasy tamin'ny fampiasana ny fiteny voajanahary mba hanao izay lazainy fa ataony. Noho izany, na dia tsy manana tranomboky misy singa aza ny Tailwind, ny fahafaha-manangana interface mora matanjaka sy mamaly amin'ny alàlan'ny fanondroana ireo anaran'ny kilasy CSS dia kanto, haingana ary tsy manam-paharoa.
Ireto misy ohatra tena tsara:
CSS ho an'ny fanohanana maody maizina
Tailwind koa manana mahafinaritra misy extension ho an'ny VS Code hahafahanao mamantatra sy mampiditra kilasy mora foana amin'ny editeran'ny kaody Microsoft.
Mbola mahira-tsaina kokoa aza, ny Tailwind dia manala ny CSS tsy ampiasaina rehetra rehefa manangana famokarana, izany hoe ny faran'ny CSS farany anao no kely indrindra mety ho izy. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny tetikasa Tailwind dia mandefa CSS latsaky ny 10kB ho an'ny mpanjifa.
Tags: atomika cssbootstraphitadyCSScss apirafitra csscss gridsstyleheetstailwindtailwind css apiui kkit
Torohevitra 3 hananganana programa Marketing Marketing amin'ny fahombiazana
Moz Pro: Manararaotra indrindra amin'ny SEO